Mukushambadzira kwema digital, mabhulogi anoramba ari musana mumunda wehuwandu hwekutengesa. Paunenge uchitarisana nemigwagwa yehupenyu, blog inzvimbo yepamhizha apo vaverengi vanobatana nehupenyu hwako. Iyi inzvimbo iyo iwe unogona kuratidza unyanzvi hwako mune zvakasiyana-siyana zvekutengeserana kwako nehutano - linux vps servers. Kuwana mutungamiri uye kutendeuka inzira yakaoma, uye bhogi iri nyore ingangova chinhu chimwe chete chaunoda kuti usvike pane chinangwa chako.
Julia Vashneva, Mutungamiriri Mukuru weVatengi Vekubudirira Semalt , anopa zvikonzero nei kugovera mabhuku kuchiri chinhu chakakosha mukutengesa kudhinda.
Mablogi anopa vashandi zvayo.
Vanhu vazhinji vanoverenga mashoko kubva pamabhulogi vari kutsvaga zivo. A blog inzvimbo yakakwana yekuwana mhinduro uye mazano kune chero chii zvacho. Bhuku rako rinogona kuva nzvimbo yakanakisisa yekuita kuti vanhu vauye kuhutano hwako uye vagoita zvisarudzo zvine ruzivo kunyanya kana iwe uine foni-ku-zvigadziro pane imwe nzvimbo mumapeji ako ewebhu.
A blog inogona kuwedzera kushandurwa.
SEO inonyanya kukonzerwa nekuwedzera kwemotokari. Kana iwe uchinge uwana magwagwa, iyo yakakwirira mukana wekutenga mutengi kubva kuvanhu vachitsvaga mazano kune webhu yako yehutano. Zvisinei, zvakasiyana zvinogonawo kuitika. Iwe unogona kuva nenhamba inowedzera yevashanyi sehamba yevaya vanoita kutenga kunoderedzwa. A blog inogona kuva yakakosha parameter mukurwisa kuti kuenzanisa..A blog inoratidza kuvimbika, uye sevashanyi vanovaka kuvimba kwako, vanozoguma vachigadzira kutenga.
Blogs rubatsiro mu Search Engine Optimization.
Chimwe chezvinowanikwa zvakanyanya kutsvaga injini dzakadai seGoogle dzinoshandisa musi wezvitsva zvitsva. Zvinyorwa zvitsva zvinowedzera nzvimbo yeGoogle yekutsvaga injini yekutsvaga kutsvaga (SERP) algorithm nzvimbo dzekutsvaga kweimwe tsvakurudzo yekutsvaga. Pamusoro pehupi hwehutaneti, zvakakosha kunyora zvitatu zvitsva vhiki imwe neimwe. Iko kushanda kunobatsira webhuseti nemabhoji kubva kuGoogle kuwana zvinyorwa zvinoenderana nehuwandu hwekukwirira iwe kune mawebsite asina kuramba achivandudza zvinyorwa zvavo.
Iwe unogona kutora vateereri.
Kubvira munaJanuary 2017, imwe yenzira dzinobatsira zvikuru Google inoshandisa kuisa nzvimbo dzepamusoro ndeyekuti yakawanda sei inosungirirwa pahutaneti zvisati zvaenda. Ichi chirevo chinoparadzanisa vanhu chaivo kubva pamusana wemaoko SEO bots. Mune mamiriro akasiyana, kana mushanyi achiuya pane peji yewebhu iwe wakasika, inowedzera mikana yekudhinda chimwe chinhu. Iwe unogona kuwedzera kutendeuka nekuwedzera kubatanidzwa kwevashandisi pane peji yedu yewebhu.
Mabhuku haasviki kuita.
Kugovera mabhuku ndeimwe yemabasa ari nyore mazuva ano, nekuda kwevakawanda SEO automation zvishandiso zviripo. Mazhinji webhusaiti dzeGoogle anopa drag uye anodonha maitiro ekugadzirisa mawebsite ako. Izvozvi zvigadzirwa zviri kuve zviri nani uye zviri nani pane nguva, uye vamwe vane unhu hwakanaka. Ruzhinji rwemashandisi aya harusununguka, asi vamwe vanoda kuti iwe ubhadhe mari yakakodzera yekugadzirisa. Uyezve, iwe unogona kugara uchitsvaga nyanzvi yekuzvipira yekuvaka imwe yako pamutengo. Kuchengetwa kwebhuku kunowedzerawo kuderera.
Kugombedzera hakusi urongwa hwekare kana zvasvika pakushambadzira kwema digital. Pasinei nekubudirira kwemaitiro matsva ekugadzira SEO, bhuku rinenge richiri nzira yekuunganidza maimeri uye kutungamirira. Iwe unogonazve kubatsirwa nezvinhu izvi uye kutsvaga kutendeuka kwakawanda ne blog yako.